Kenya oo la sheegay in ay ku fashilantay wax ka qabashada Ammaanka Magalada Mandera
Maamulka Magaalada Mandeera ayaa ku eedeeyay Dowladda Kenya in ay ku fashilan tahay wax ka qabashada Weerarada qorsheysan ee Al Shabaab oo inta badan ka dhaca Gobolka Waqooyi Bari ee Dalkaasi.
Guddoomiyaha Magaalada Mandeera, Cal Roba ayaa waxuu shaaca ka qaaday in Dowladda Kenya ay mas’uul ka noqoneyso Weerarada ka dhaca Deegaanada hoostaga Magaalada Mandera.
Guddoomiye Cali Roba ayaa xusay in Xoogaga Xarakada Al Shabaab ay weeraro dhowr ah ku beegsadeen Shirkada Isgaarsiinta ee Safaaricom, taasi oo haatan khasaaro badan ka cabaneysa, sida uu hadalka u dhigay.
Mr. Cali Roba ayaa qeexay in Dagaal yahanada Al Shabaab ay weeraro kala duwan ku qaadeen Xarumaha Shirkadan Isgaarsiineed ay ku leedahay Degaanada Damasa, Dabacity, Kutulo iyo Chabi Bar oo hootaga Magaalada Mandeera.
Waxuu shaaca ka qaaday in Madaxda Dowladda Kenya ay ka gaabiyeen in Ciidamo ka hortaga Weeraradaasi ay u soo daabusho Degaanada hoostaga Magaalada Mandeera.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxuu su’aal ka keenay sababta Dowladda Kenya ka hortaagan in Ciidamado ay u soo dirto Degaanada Gobolka Waqooyi Bari ee Dalka Kenya.
Hadalka Guddoomiye Cali Roba ayaa waxuu daba socdaa weerar dhawaan Xoogaga Al Shabaab ay ku burburiyeen Xarun Shirkadan ay ku leedahay Magaalada Ceelwaaq ee Dalkaasi Kenya.
Ugu dambeyn, Dalka Kenya qeybo ka mid ah ayaa inta badan waxaa ka dhaca Weeraro qorsheysan oo qaarkood geysta khasaaro isugu jiro dhimasho iyo dhaawac, kuwaasi oo mas’uuliyadoodu ay dhabarka u ritaan Xarakada Al Shabaab.